gurans life insurance limited(gurans life insurance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
gurans life insurance limited
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा बसोबास गर्ने सुमन राना मगरको मृत्युपश्चात बीमितका इच्छाएको व्यक्ति श्रीमान इन्द्रबहादुर राना मगरलाई गुराँस सावधिक जीवन बीमा गराएबापत बीमा दाबी रकम हस्तान्तरण गरेको छ। कम्पनीको नारायणगढ शाखामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच शाखा...
गुराँस लाइफद्वारा अभिकर्ताहरु सम्मानित
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको राष्ट्रियस्तरको अभिकर्ता उत्प्रेरणा, एमडीआरटी, सीओटी तथा टीओटीलाई सम्मान गरेको छ। पोखराको होटल ग्रान्डमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा देशभरिका करिब ४०० उत्कृष्ट अभिकर्ताको संलग्नतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन...
गुराँस लाइफको एजीएमबाट लाभांश पारित
काठमाण्डौ। गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आज सम्पन्न ११ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट आर्थिक वर्ष २)७५÷७६ का लागि प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ। काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा भिडियो कम्फ्रेन्सका माध्यमबाट सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश अनुमोदन गरेको हो। जसमा...
गुराँस लाइफ : खुद बीमाशुल्क रु. ८६.३३ करोड, नाफामा ४.१५%को गिरावट
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ८६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०.३० प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा मंसिर १० मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा मंसिर १० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित राज भवनमा रहेको कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट बिहान ११ बजेबाट...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा सेयर स्वामित्व परिमार्जन, अब संस्थापक र सर्वसाधारणको कति–कति?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको छ। कम्पनीले झन्डै १८ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको हो। सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न कम्पनीले १७ लाख ७८ हजार २६.१४ कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट हालसम्म कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार ६०० रुपैयाँको ५.७९ प्रतिशत लाभांश...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको छ। कम्पनीले पौने २० लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको हो। सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न कम्पनीले १९ लाख ७५ हजार ५८४.६ कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा...
गुराँस लाइफले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने, अब कति–कति ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने भएको छ। बीमा समितिको स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामितव परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल कम्पनीमा संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। कम्पनीको छैटौँ...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स १४ औँ वर्षमा प्रवेश, यस्ता छन् आगामी प्रतिबद्धता
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३ औँ वर्ष पूरा गरी १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनीले २०६५ जेठ १७ गते पहिलो बीमा पोलिसी जारी गरी नेपालमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको थियो। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीले कम बीमा शुल्कमा अधिकतम प्रतिफल दिने प्रतिबद्धतसमेत व्यक्त गरेको छ। यसका साथै आम जनताहरुमा बीमाको पहुँच...
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको कम्पनी सचिवमा बोधलाल पुरी नियुक्त भएका छन्। कम्पनी संञ्चालक समितिको गत वैशाख १२ गते बसेको बैठकले पुरीलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही बैठकले यसअघि कम्पनी सचिव रहेको बालमुकुन्द रुपाखेतीको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ। ...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बुधबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनार्थ भोलि (कात्तिक २० गते) देखि मंसिर ४ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज (कात्तिक १९ गते) सम्म काम सेयरधनीहरुमात्र...
गुराँस लाइफको बिमाशुल्क १५.५७% ले बढ्यो, बिमालेखको संख्या ह्वात्तै घट्यो
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म २ अर्ब २२ करोड बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९२ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ५० करोड ९४ लाखमा सीमित...